गभर्नर | Ratopati
'अध्ययनको प्रारम्भिक रिपोर्ट एक साताभित्रै आउँछ, त्यसपछि अर्को राहत घोषणा गर्छौं' access_timeबैशाख १४, २०७७
महाप्रसाद अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर हुन् । गत चैत २४ गते नेपाल सरकारबाट राष्ट्र बैङ्कको १७औं गभर्नरको रुपमा नियुक्त भएका अधिकारी राष्ट्र बैङ्कमा ३० वर्ष सेवा गरेर बाहिरिएको ४ वर्षपछि पुनः राष्ट्र बैङ्कमा फर्किएका हुन् । अधिकारी डेपुटी गभर्नर भएर बिदा हुने...
नवनियुक्त गभर्नर अधिकारीले गरे पदभार ग्रहण access_timeचैत २५, २०७६
काठमाडौं । नवनियुक्त गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पदभार ग्रहण गरेका छन् । सोमबार नेपाल सरकारबाट राष्ट्र बैंकको १७ औं गभर्नरको रुपमा नियुक्त भएका अधिकारीले मंगलबार राष्ट्र बैंकमा गएर पदभार ग्रहण गरेका हुन् । पदभार ग्रहणअघि अधिकारीले राष्ट्र बैंकमा आयोजित विशेष कार्...
महाप्रसाद अधिकारी : सदाबहार ‘सत्ताधारी’, नियुक्तिमा ह्याट्रिक access_timeचैत २४, २०७६
काठमाडौं । महाप्रसाद अधिकारी गभर्नरको रुपमा पुनः नेपाल राष्ट्र बैंकमा फर्किएका छन् । ३० वर्ष सेवा गरेर डेपुटी गभर्नर हुँदै ४ वर्षअघि राष्ट्र बैंकबाट बाहिरिएका अधिकारी गभर्नर नियुक्त हुँदै पुनः राष्ट्र बैंकमा फर्किएका हुन् । अघिल्लो कार्यकालमा नै डेपुटी गभर्नर हुँ...
राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा तीन जनाको नाम सिफारिस access_timeचैत २४, २०७६
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरका लागि ३ जनाको नाम सिफारिस भएको छ । गभर्नर छनौट सिफारिस समितिले मायम मुकायम गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी, पूर्व अर्थसचिव डा. राजन खनाल र लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीको नाम सिफारिस गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रो...
गभर्नरको अङ्कगणित : अर्थमन्त्रीको पहुँचले भ्याउँदैन, प्रधानमन्त्रीको रोजाइमा को ? access_timeफागुन १५, २०७६
काठमाडौं । गभर्नरका लागि मन्त्रिपरिषदमा औपचारिक रुपमा नाम सिफारिस गर्नुअघि २०७१ सालमा तात्कालिन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई ३ जनाको नाम सुनाए । गभर्नर छनौटका लागि गठन भएको समितिका संयोजक समेत रहेका महतले कोइरालालाई डा. विश्वम्बर प्याकु...
बैंक तथा वित्तीय संस्था निजी कम्पनी होइनन् : गर्भनर नेपाल access_timeकात्तिक २५, २०७६
काठमाडौं । निजी कम्पनीको रुपमा खोलिएपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थानहरु निजी कम्पनी हुन नसक्ने राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा.चिरनजिवी नेपालले बताएका छन् । सोमबार राजधानीमा आयोजित समृद्धि फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडको समुद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै गर्भनर नेपालले निजी क्षेत्रबाट खोलिएपन...